| တရုတ်ဗဓေလသစ် Plug Hole ရော်ဂျာနှစ်ချက် Pcb circuit board ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းဘက် Fastline
အဆိုပါဗဓေလသစ် plug ကိုပေါက် Rogers နှစ်ဆတဖက်သတ် pcb ဆားကစ်ဘုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုမယ့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ထက်ပိုမို 10 နှစ် PCB နှင့် PCBA စက်မှုလုပ်ငန်းအာရုံစိုက်နှင့်အဓိကအားဖြင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စျေးကွက်အမှုဆောင်နေကြတယ် အဖြစ်မြောက်ဘက်နှင့်တောင်အမေရိကနှင့်အရှေ့တောင်အာရှစျေးကွက်။ ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာစျေးကွက်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုအရည်အသွေးကိုထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ကူညီဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
၏ 1.Introduction ဗဓေလသစ် Plug Hole ရော်ဂျာနှစ်ချက်ဘက် Pcb circuit board
ဗဓေလသစ် Plug Hole ရော်ဂျာနှစ်ချက်၏ 2.Production အသေးစိတ် Pcb circuit board ဘက်
3. ဏလျှောက်လွှာ ,fဗဓေလသစ် Plug Hole ရော်ဂျာနှစ်ချက်ဘက် Pcb circuit board
4. အရည်အချင်း ဗဓေလသစ် Plug Hole ရော်ဂျာနှစ်ချက်ဘက် Pcb circuit board
ရော်ဂျာ Pcb circuit board ကို Reverse Engineering ကို w ...
Fr4 Flex ကို PCB, တင်းကျပ် Flex ကို PCB, တင်းကျပ်-Flex ကို PCB ဘုတ်အဖွဲ့, Customized Rigid-Flex PCB, ရော်ဂျာ PCB, တင်းကျပ်-Flexible PCB,